Hoover H-Sifeeye 700, dib-u-eegis ku saabsan sifaynta hawadan ballaaran | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 05/06/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 27/05/2021 21:24 | General, Reviews
Sifeeyaha hawadu waa shey si aad ah u soo badanaya, gaar ahaan waqtigan marka manka uu noqdo cadowga koowaad ee muwaadiniinta xasaasiyadda qaba. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda markaan ka hadlayno magaalooyin waaweyn, halkaas oo wasakhdu soo saari karto heerar gaasas ah oo guryaha ku jira oo aan ku habboonayn nolol maalmeedka oo sababi kara cudurro.
Waxaan dhowaan ku lafagurnay waxyaabaha kale ee ku jira barnaamijka 'Actualidad Gadget', maantana waanu keenaynaa Hoover H-Sifeeye 700, Sifeeye hawo leh baaxad weyn waxaana ka mid ah huuryeere ka mid ah faa'iidooyinka kale. Nala baro waxyaabaha muhiimka ah, iyo dabcan sidoo kale daciifnimadiisa.
2 Astaamaha farsamada iyo shaandhaynta
3 Isticmaal iyo qaabab
4 Ku darista iyo ra'yiga tifaftiraha
Hoover waa shirkad dhaqameed, taas oo aad doorbideyso inaad ku xasuusato guulaheedii waaweynaa ee ay kuqadeen nadiifiyeyaashii hore. Waqtigan xaadirka ah noocyadeeda kala duwan ayaa si aad ah loo cusbooneysiiyay, iyaga waxaa ka mid ah kuwa aan helno H-Sifeeyaha, wax nadiifiya hawo toosan iyo qaab-hawleed isu eg. Aagga hoose waxaa loogu talagalay shaandhada nuugista miiraha ee midabka lacagta, iyadoo caag ah. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda qaybta sare, caag cad oo aan ka helno laba gacan oo laga celin karo gaadiidka, faahfaahinta hawlgalka iyo aagga sare, halkaasoo sixirku ka dhacayo.
Midabada: Silver / Silver + Caddaan
Miisaanka: 9,6 Kg
Cabirrada: 745 * 317 * 280
Aaggan sare wuxuu leeyahay hawo-mareenka hawada ka baxa iyo guddi koontarool leh oo leh wareeg wareeg ah oo tilmaami doona xaaladda. Waxaan ku haynaa hawlo kala duwan guddigan taabashada oo aan gadaal ka hadli doonno. Gadaal ayaa looga tagay odoros iyo daboolka shaandhada. Markaad ka saareyso, waxaan heli doonnaa nidaam fiilooyin soo uruurineed oo sidoo kale aad loo qadariyo, inkasta oo ay haa tahay, waxaan seegnay fiilo aad u ballaadhan iyada oo la tixgelinayo nooca badeecadda aan la macaamilayno. Maaddaama ay leedahay cirib otomaatig ah, xarigga laguma beddeli karo mid ka dheer.
Astaamaha farsamada iyo shaandhaynta
Hoover H-Sifeeyaha 700 wuxuu leeyahay WiFi iyo isku xirnaanta Bluetooth qaab isku dhafan oo loogu adeegsado arjiga, wax la yaab leh oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaheeda. Waxay sidoo kale leedahay dareemayaal feejignaan u leh heerarka sare ee kaarboon laba ogsaydhka, iyo sidoo kale dareeraha heerkulka iyo huurka, wax la qaddariyo iyadoo la tixgelinayo goobta ay ku taal alaabtu iyo sida ay muhiimka u tahay xogta noocan ahi maalin kasta. Dhinaca kale, waxaan sidoo kale leenahay aaladda 2,5 iyo 10 nm. Shaqsi ahaan, Waxaan u maleynayaa midka PM PM 2,5 lahaa inuu kufilan lahaa.
Qiimaha shaandhada: 59 euro
Xagga sare waxaan leenahay shaashadda oo noo sheegi doonta tayada hawada waqtiga dhabta ah. Waxaan haynaa ogeysiisyo loogu talagalay dayactirka shaandhada, oo aan hoos kaga hadli doonno. Waxaan leenahay seddex lakab oo sifeyn ah oo leh miiraha dibedda lagu dhaqi karo, miiraha Hera H13 iyo miiraha kaarboon firfircoon taas ayaa noo oggolaan doonta inaan sii wadno hawlgal la'aanta manka, gaar ahaan xiisaha loo qabo kuwa xasaasiyadda qaba. Marka, qalabkani aragti ahaan wuxuu ku habboon yahay boosaska ilaa 110 mitir, waxaan ku tijaabinay meelo qiyaastii ah 55 mitir murabac. Waxay leedahay tirtiridda VOC iyo ugu badnaan mitir cubic mitir la nadiifiyey saacaddiiba waxay noqon doontaa 330, baabi'inta 99,97% qurubyada ganaaxa.
Isticmaal iyo qaabab
Hoover H-Sifeeyaha 700, oo aad ka iibsan karto Amazon, Waxay leedahay seddex qaab oo aasaasi ah: Habeen, Auto iyo ugu badnaan, oo lagu qaabeyn doono guddiga taabashada iyo arjiga. Si kastaba ha noqotee, Waxaan sidoo kale heli doonnaa huuryeye iyo faafin caraf udgoon, kaas oo aan ku kabi karno alaabada ku jirta xirmada. Waa ku daris xiisaha u leh huuryeynta oo aan sidaa u sii badneyn oo sifeeyeyaal badan oo heer sare ah lagu nadiifiyo, marka waa dheeri.
Soodejiso barnaamijkii hore ee Hoover
Soodejiso barnaamijka cusub ee Hoover
Dhinaceeda, iyada oo loo marayo aplicación waxaan ku habeyn karnaa H-Sifeeyaha si uu ugu adeegsado labo caawiye oo caan ah oo caan ah, waan ka hadalnaa Amazon's Alexa iyo Kaaliyaha Google. Labada xaaladoodba, waxaa lagu dhex dari doonaa liistadayada qalabka waxayna noo oggolaan doontaa inaan daarno oo aan dansano qalabka markii aan doono, iyo sidoo kale barnaamijka howlgalka ka baxsan dalabka uu bixiyay Hoover laftiisa. Codsiga waa la horumarin karaa, wuxuu leeyahay interface isticmaale oo ina xusuusinaysa waxyaabo badan oo kale oo ka soo jeeda asal ahaan Aasiya, hase yeeshe, waxay sameysaa wixii ay ballan qaaddo.
Ku darista iyo ra'yiga tifaftiraha
Waxaan ku leenahay H-Nadiifiyaha 700 kala duwanaanshaha H-Essence, taas oo ah dhalooyin yaryar oo saliidaha lagama maarmaanka ah ah oo si toos ah loo dhigayo, iyada oo dhalada ku jirta mashiinka wax lagu shubo. Tan macnaheedu waa aragti ahaan waxaan isticmaali karnaa oo keliya Hoover saliidaha lagama maarmaanka ah tan iyo markii dhalada ay ku habboon tahay qalabka. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu waxay tahay inaad buuxin karto dhaladan haddii aad rabto saliidaha saddexaad ee muhiimka ah, wax aan kugula talinayo inaad kaydiso kharashyada. Tani maahan kiiska shaandhada, oo umuuqata inay gebi ahaanba lahaansho leedahay, laakiin kugula talin mayno xoqitaan midkoodna, gaar ahaan kiiskan maxaa yeelay qiimaha waa mid la awoodi karo marka la barbar dhigo tartamayaasha suuqa. Waxaan sidoo kale leenahay H-Biotics, noocyo kala duwan oo jeermis dile ah iyo waxyaabo probiotic ah oo loo soo gudbiyo qalabka wax lagu shubo.
Socodka hawadu aragti ahaan waa 360º, si kastaba ha noqotee, dareemayaasha ayaa i siiyay qiimeyn yar oo kala duwan marka loo eego alaabada kale ee aadka u sarreeya. Tuubbada hawada ee la sifeeyey uma muuqato mid awood badan sida laga filan karo badeecad ballan qaadaysa illaa 300 oo mitir cubic saacaddii, intaa waxaa sii dheer, tani waxay si weyn u wiiqi doontaa aamusnaanta, taas oo xawaare hoose la aqbali karo, laakiin habka habeenkii maaha inta ay tahay. waan filayey. Dadka dhib ku qaba inay ku seexdaan buuq, H-Sifeeyaha ayaa loo baahan doonaa in la damiyo. Tani waxay ahayd waayo-aragnimadeena H-Sifeeyaha 700.
H-Sifeeyahaani wuxuu na siinayaa bedel aan ku bixin qiimo aad u sarreeya, oo aan u tudhin waxyaabaha lagu daro sida huurka, dareemayaasha ama qaybiyaha nuxurka, laakiin faahfaahinta qaarkood waxay weli ka hooseysaa kuwa kale ee wax sifeeya dhammaadka sare sida Dyson ama Philips. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanta qiimaha ayaa caan ah oo xitaa waxay na siisaa awood dheeri ah. Waxa ugu xun ee khibradeena waa codsiga, ugu yaraan qaybtiisa iOS. Waxaad H-Sifeeyaha 700 ka heli kartaa 479 yuubo on Amazon.
Ku dhejiyay: 5 Juunyo 2021
Awood u leh in la nadiifiyo
Isku xirnaanta iyo barnaamijka
Naqshad qurux badan
Tiro badan oo dareemayaal ah
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Hoover H-Sifeeyaha 700, dib-u-eegista hawo-sifeeyaha ballaaran